ကွန်ပျူတာထဲမှာ JOYSTICK ချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
အားလုံးကတော့ကွန်ပျူတာဂိမ်းများ, အထူးသဖြင့်, မောက်စ်နဲ့ကီးဘုတ်ကနေတဆင့်ထိန်းချုပ်အဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, consoles စဖို့ ported ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်အဖြစ်အချို့တခြားသူတွေကို, သင်ကို PC ပေါ်တွင်ဂိမ်းဆော့ခလုတ်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် configure လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကို PC ဖို့ Controller ချိတ်ဆက်ခြင်း
တောငျးဆိုခကျြတှငျ, သင်ကသင့်လျော်သည့် USB-plug ကိုရှိခြင်းစာသားမဆိုခေတ်မီဂိမ်းဆော့ခလုတ်မှကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ အခြား devices များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများကိုချိတ်ဆက်ထားပေမယ့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်သီးခြားဆောင်းပါးထိုက်နိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်: ဂိမ်းဆော့ခလုတ်နှင့် Joystick - controller စနှစ်ခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်, သူတို့ကစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်မှကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီအပေါ်ကိုပိုမိုသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတွေ့မြင်ရန်လုံလောက်သည်ကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
Option ကို 1: DualShock3PS3 ကနေ
ပုံမှန်အားဖြင့် PlayStation3ဂိမ်းဆော့ခလုတ်အထူးယာဉ်မောင်းကိုသာဒေါင်းလုပ်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းလိုအပ်, Window အတူအလုပ်ထောက်ခံပါတယ်။ ဒီ controller ကိုကျနော်တို့ site ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါး၌လေ့လာကွန်ပျူတာမျိုးစိတ်ချိတ်ဆက်မှု၏ဖြစ်စဉ်ကို။
Read more: PC ကိုရန် PS3 ကနေဂိမ်းဆော့ခလုတ်ချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
Option ကို 2: PS4 ၏ DualShock 4
PlayStation4ကနေဂိမ်းဆော့ခလုတ်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေး၏စွမ်းရည်များပေါ် မူတည်. နည်းလမ်းများစွာအတွက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: ကိုသာအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆို drivers တွေကို install လုပ်မပါဘဲယေဘုယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
က Wired ဆက်သွယ်မှု
cable ကို connector ကိုချိတ်ဆက်ရန်, ယူနစ်ကိစ္စတွင်ထိပ်ပေါ်ကို bundle ။
wire ကို၏နောက်ကျောဘက်မှာက USB-connector ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင့်လျော်သော port ကိုချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။
ထိုနောက်မှတစ်ဘီးပ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်လိုအပ်သော software များရဲ့အလိုအလျှောက် installation ကိုစတင်ရပါမည်။
အပိုင်း "ဖုန်းများအတွက်နှင့်ပုံနှိပ်" ဂိမ်းဆော့ခလုတ်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေရဲ့စာရင်းထဲတွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
စက္ကန့်အနည်းငယ်ဂိမ်းဆော့ခလုတ်ခလုတ်များအတွက် Hold "PS" နှင့် "Share".
အောင်မြင်သောလြှငျ, flash မှ Bluetooth ကိုညွှန်ပြချက်အလင်းစတင်ဖွင့်။
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Bluetooth ကိုယာဉ်မောင်း pre-install လုပ်ပါက enable ။
Read more: သင့်ရဲ့ PC မှာဘလူးတုသ်ကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
ရှာဖွေရေး window ကိုဖွင့်ပါနဲ့ New Connection ကို select လုပ်ပါ "ကြိုးမဲ့ Controller".
အဆိုပါစနစ်သည်အားလုံးလိုအပ်သောဒရိုင်ဘာ download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်: ချိတ်ဆက်သောအခါ, ကုဒ်ကိုသုံးပါ "0000".
အချို့ကိစ္စများတွင်, ဒီကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်သည်, ထိုဂိမ်းဆော့ခလုတ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းကို manually install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကပေးအပ် link ကိုကနေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဆော့ဖ်ဝဲလည်ပတ်ခွင့်။
Windows အတွက် DualShock4drivers တွေကို Download
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အခုဆိုရင် Download"ဖိုင်ကို Download "DS4Windows".
မဆိုအဆင်ပြေရာအရပျထဲမှာ archive ရဲ့ contents Extract လုပ်ပါ။
ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်တွဲ, run ထဲမှာ "DS4Windows".
ကနဦးပြတင်းပေါက်မှာပရိုဂရမ် settings ဖိုင်များကိုကယ်ဖို့တစ်ခု option ကိုရွေးပါ။
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "Settings" ကို နှင့် link ကို click နှိပ်ပြီး "Controller / ယာဉ်မောင်း Setup ကို".
စာနယ်ဇင်းများ "ဟုအဆိုပါ DS4 Driver Install"device ကိုများအတွက် software ကို install စလုပ်ဖို့။
သငျသညျကို manually အသစ်သော software များ၏ installation အတည်ပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါကမ္ပည်းပြီးနောက် "အပြီးအစီး Install"စာနယ်ဇင်းများ "Finish ကို".
ဒီပရိုဂရမ်ကိုသင် DualShock4များအတွက်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်, ဒါပေမယ့်လည်းခလုတ်ကိုတာဝန်တွေစိတ်ကြိုက်သာခွင့်ပြုပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့ PlayStation4ကနေဂိမ်းဆော့ခလုတ်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် configure တယ်ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။
option 3:, Xbox 360 နဲ့တစျခု
အဆိုပါ PlayStation ၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့, Xbox 360 နဲ့ One ပေါ်တွင် GamePad သည့် Windows operating system နှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းအတွက်မောက်စ်နဲ့ကီးဘုတ်အတွက်အစားထိုးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒီဆက်သွယ်မှုအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်နှိုက်ကအဆိုပါ Controller ကိုမျိုးစိတ်အပေါ်တိုက်ရိုက်မှီခိုသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ:, Xbox 360 Controller များအတွက်ဒေါင်းလုပ်ယာဉ်မောင်း
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်အရေးယူသက်ဆိုင်ရာ socket နှင့်အတူကို USB-plug ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကြိုး controller ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ချိတ်ဆက်ဖို့, ဒါပေမယ့်လည်း drivers တွေကိုတပ်ဆင်ရန်သာလိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
တဲ့ Xbox One ဂိမ်းဆော့ခလုတ်၏အမှု၌သင်တို့တစ်ကေဘယ်လ်လိုအပ်ပါတယ် "ကို USB - Micro-USB အ"ဘယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သင့်လျော်တဲ့ connector ကိုချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာက USB-port အတွက်, ကိရိယာကနေ cable ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
အများအားဖြင့်, လိုအပ်သောဒရိုင်ဘာများကိုအလိုအလျောက် installed နေကြသည်။ ကမလျှင်, menu ကို "Start" ပွင့်လင်းအပိုင်း "Device Manager".
မှတ်ချက်: Windows 10 ကို default အတဲ့ Xbox One ဂိမ်းဆော့ခလုတ်နှင့် software ကို install လုပ်ဖို့မလိုအပ်နှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက်သည်။
စာရင်းတိုးချဲ့ "Microsoft က Xbox One မှာ Controller" နှင့်ဂိမ်းဆော့ခလုတ်၏အမည်နှင့်အတူလိုင်းကို double-click လုပ်ပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင်လိုချင်သောအပိုင်းအဖြစ်မှတ်သား "Windows ကိုအတန်းများအတွက်ခြုံငုံ controller ကို (Microsoft မှ)" သို့မဟုတ် "Peripheral, Xbox 360".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, tab ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ယာဉ်မောင်း" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Update ကို".
အခုဆိုရင်သင်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ် "အလိုအလျောက်မောင်းသူ updates များကိုရှာဖွေ"။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျတခုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ဤအခြေလှမ်းများပြီးသွားချိန် device ကိုမဆိုသင့်လျော်သောဂိမ်းမှာ check လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
တဲ့ Xbox One ဂိမ်းဆော့ခလုတ်ကနေ USB မှတ်-cable ရဲ့အကူအညီဖြင့် မှလွဲ. သင်ကကြိုးမဲ့သင့်ရဲ့ PC ကိုခြိတျဆကျနိုငျသညျ။ သို့သော် devaysa အပြင်၌ဤအထူး adapter Windows အတွက် Xbox One မှာလိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို USB-interface ကိုမှ, ကြိုတင်ဝယ်ယူသည့် Adapter ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အသုံးပြုမှု adapter ဖို့တိုးချဲ့ရန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းဟာခြယ်လှယ်များ၏မြင်ကွင်းများ၏ဇုန်တွင်တည်ရှိသည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက်ဗဟို button ကိုနှိပ် "Xbox" ကိရိယာ။
အဆိုပါ Controller ကိုနှင့် adapter ပေါ်တွင်အယ်လ်အီးဒီဆက်သွယ်ထားသော၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မျက်တောင်ခတ်သင့်တယ်။ အောင်မြင်သော connection ကိုအပေါ်သို့သူတို့ကစဉ်ဆက်မပြတ်မီးရှို့မည်။
Option ကို 4: အခြားမော်ဒယ်များ
အထက်ပါမျိုးစိတ်အပြင်, console ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို controller စလည်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Joystick အဖြစ်အထက်တူညီတဲ့ညွှန်ကြားချက်အပေါ်နိုင်ပါတယ်ချိတ်ဆက်ပါ။
တပြိုင်နက်တည်းထောက်ခံမှုနှင့်အတူဂိမ်းဆော့ခလုတ်ဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံး "DirectInput" နှင့် "XInput"။ ခလုတ်စိတ်ကြိုက်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်းနေချိန်မှာဒါဟာသင်, များစွာသောဂိမ်းထဲမှာကိရိယာကိုသုံးခွင့်ပြုပါတယ်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်အပိုဆောင်း software ကို၏ installation မလိုအပ်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကြောင့်ထုတ်လုပ်သူဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံ့ disc ကို၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကနေကားမောင်းသူကိုတပ်ဆင်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းဆော့ခလုတ်ဂိမ်းများနှင့်အချို့သောခလုတ်ချွတ်ယွင်းမှုအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်, သင် program ကို x360ce ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုသင်ကိုယ်တိုင်ခြယ်လှယ်များ၏အပြင်အဆင်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ဂိမ်းများနှင့်အတူလိုက်ဖက်မှုတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
တရားဝင် site မှ X360ce download,
ထို့အပြင် software ကိုသင်သင့်လျော်သော application ကို run နေစရာမလိုဘဲချိတ်ဆက်ဂိမ်းဆော့ခလုတ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစမ်းသပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: သင်၏ PC ကိုရန်စတီယာရင်ဘီးကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
သင်ကွန်ပျူတာကိုမဆိုသင့်လျော်သောဂိမ်းဆော့ခလုတ်ချိတ်ဆက်ရန်မပြဿနာများရှိသည်လိမ့်မယ်ဤဆောင်းပါးကိုအရေးယူအတွက်ခြေလှမ်းများကိုသုံးပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တစ်သဟဇာတစက်ကိရိယာနှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်း၏အောင်မြင်သောဆက်သွယ်မှုများအတွက်အဓိကအခွအေနေ။